Waxaa laga yaabaa in aad adiga oo isticmaalaya qaar ka mid ah daalacashada internetka mobile inta badan loo yaqaano ilaa hadda. Halkan waa wax yar kuwa kale in ay yihiin feature-qani oo waxaad u isticmaali kartaa qalabka Android ama arrimo sida aad doorato.
• 1. hoomboro
Dhinaca sare ee liiska, iyada oo qaar ka mid ah sifooyinka gaar ah isku dhafan waa in, iyo riyaaqayaa rating xiddiga reer 4.6 out of 5 on Google Play Store, hoomboro waxaa laga heli karaa labada dhufto ee Android iyo macruufka. A muuqaalada casri yar in dalabyo browser web waxa ay kala yihiin qalab cod ku salaysan-raadinta loo yaqaan SOONAARKA, tilmaam-u janjeedha bookmark navigation oo awood aad u soo jiidi xarfaha shaashadda si ay u helaan goobaha bookmarked, iwm
Waxa intaa dheer in sifooyinka kor ku wada hadleen, qaar kale oo badan in karti karaa ayadoo laga soo degsado free ah iyadana in la heli karaa online for browser.
Sida caadiga ah amarrada loo isticmaalo waa la dili karaa waji.
Kuu ogolaanayaa in uu badbaadiyo taariikhda ama khasnado in kaarka SD ah.
The feature YouTube download la tir tiro.
Iyada oo ah flash-dhexgalka hufan oo ku riyaaqayaa rating xiddiga 4.5 ka soo 5 labada dhufto ee, Maxthon waa la heli karo qalabka Android iyo macruufka. Habkaani wuxuu ku Split-Screen in browser tani kuu ogolaanaya in aad si madax bannaan u shaqeeyaan laba daaqadaha kala duwan (bidix iyo midig), sidaas lagu badbaadinayo waqtiga aad.
Maxthon uu leeyahay muujinta tirtireyso kuu ogolaanaya inaad u furto isha la kac ahayn la xiray, iyo tabs furay waa auto-badbaadiyey in la soo celin karaa ay dhacdo in nidaamka ama app shil.
Kuu ogolaanayaa .Wadashaqayntaas dhexeeya qoraaladoodii mobile iyo PC.
Miyuu flash-dhexgalka ugu fiican.
Ma taageeri cod-amarrada.
Gaw loogu talagalay oo loogu talagalay iPhone iyo iPad, Opera Coast waa Apple-u janjeedha browser a web caadiga ah la rating xiddiga reer qiyaastii 4.5 out of 5. Maaddaama ay ka maqan daafaca iyo weerarka button, Opera Coast bixisaa dadban (bidix ama midig) si ay u guuraan iyo dib bogagga internetka, sidaas lagu badbaadinayo lacagta cajiib ah oo waqti users '.
The smart auto-Qarinaysaan cinwaanka bar kaliya button Home la arki karo awood u default screen-buuxa aragtida waxa ku jira shaashadda mobile. Joogtaynta muujinta Dial Speed ​​dhaqanka ka dhigtay awowayaashood, ay, Opera Coast kuu ogolaanayaa inaad si ay u booqdaan bogagga internetka ee aad ugu jeceshahay la tab hal, sidaa darteed waxaad la siiyo khibrad dhamaadka user hufan.
Kuu ogolaanayaa aragtida screen-buuxa ay sabab u tahay navigation saaro ama qalab kale.
Si buuxda u tilmaam-u janjeedha navigation.
Heli karaa oo kaliya qalabka macruufka.
Mararka qaarkood ah bogaga yar laga yaabaa in la bixiyo si qaldan.
Browser caan ah oo loo yaqaan A u fudud iyo riyaaqayaa rating xiddiga reer 4.4 out of 5 on Google Play Store. UC Browser Mini awood u loading bogagga internetka iyo waxyaabaha kale ee la isu eego si degdeg ah. Iyada oo awood u leh inuu auto-xira in goobaha ilaha download, UC Browser Mini kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi waxyaabaha duwan oo isku mar ee asalka ah.
Qaar ka mid ah qaababka kale cajiib ah in dalab UC Browser Mini waxaa ka mid ah, Mode Night kaa caawinaya in aad u aragto waxa ku jira ku-screen fudayd habeenkii, tilmaam ku wajahan horumarka video oo gacanta mugga, iwm
Kuu ogolaanayaa dajinta degdeg ah ee ku jira internetka.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waayo-aragnimo ay mararka qaarkood ka danbayso.
Version A is haysta ee Opera web browser mobile in kasbadeen rating xiddiga ah ee 4.3 out of 5 Android madal laakiin kaliya 3 ka mid ah 5 ee macruufka madal la xoojiyey dhammaan muuqaalada ay walaalaha ah oday, sida Opera. Sababtoo ah design ku dheggan in Opera Mini leeyahay, dhammaan waxyaabaha la soo bandhigay shaashadda yihiin sida Tifaftirayaasha, sidaas samaynta browser miisaanka yar oo taas oo ku shuban eego si degdeg ah.
Iyadoo tababaraha download lagu daray, Opera Mini waxay kuu sahlaysaa in aad kala soo bixi waxyaabaha aad jeceshahay si fudud oo si deg deg ah, sidaa darteed iyaga aad heli karto xitaa marka aad offline. Faa'iido:
Ordi karaa telefoonada gacanta la tilmaamaha gaarka u hooseeyo.
Easy Mozilla ama ka halka arkaysid pages.
Kalfadhi Page dhacayo (time-out) halkii ay si degdeg ah haddii howsha qaadataa waqti aad u dheer.
Developed si gaar ah u Android madal ka dib markii mahad weyn users PC, Opera ayaa 4.3 out of 5 xiddiga rating ay dadka isticmaala mobile on Google Play Store. Iyadoo feature Speed ​​derejooyinkii, Opera kuu ogolaanaya in aad isticmaalaysa websites aad jeceshahay la tuubada kaliya, iyada oo aan aad qortid URL buuxa ama helidda xiriirka bookmarked.
Mid ka mid ah qaababka ugu waaweyn ee Opera bixisaa waa riixo warbaahinta hoorto in loo sameeyaa by Server-keeda ka hor ku jira ayaa laga heli karaa idiin aad screen mobile, Halkan ka badbaadiyo qadar hufan ee bandwidth Internet taas oo waxtar leh gaar ahaan marka aad qorshaha xogta ku koobnayn.
Kuu ogolaanayaa dhirta si dhakhso ah oo xawaare navigation.
Fursadaha Security sida Control waalidka ka maqan.
Haddana mid kale oo ka mid ah daalacashada internetka ugu caansan oo loo isticmaalo dadka isticmaala mobile. Well-yaqaan, waayo kala duwan toosaa ee fur-tago iyo riyaaqayaa rating ee 4.3 out of 5 stars by Android users, Firefox u Android bixiyaa qaababka badan oo casri ah sida tababaraha password, xanibaha ad, iwm
Waxa intaa dheer in, marka loo isticmaalo xisaabta Firefox, Firefox nidaameed kuu ogolaanayaa inaad waafajinta aad Firefox on PC la version mobile si ay aad uga bogato user aan xuduud lahayn eegin qalabka aad rabto in ay ka shaqeeyaan.
Miyuu sifooyinka gaarka ah iyo ammaanka wanaagsan.
In uu dhisay-in PDF siladda.
Miyuu is-dhexgalka ee shabakadaha bulshada.
Ma ogola .Wadashaqayntaas la Qalabka telefoonada gacanta Apple.
Chrome waa mid ka mid ah daalacashada internetka ugu caansan oo loo isticmaalo labada kumbiyuutarada iyo qalabka mobile. Inkasta oo ah in mid ka mid ah kooxda ay xafiiltamaan weyn ee Apple, Google Chrome soo bandhigay qalabka macruufka iyo sidoo. Halkee Chrome jecel yahay xiddiga rating ee 4.2 out of 5 by Android isticmaala, in aanay in nasiib qalabka Apple oo waxaa kasbadeen 3 kaliya xiddigaha.
Sababta guusha in Chrome jecel yahay waa ay interface user-friendly oo ay la socdaan awood u leeyahay inuu u hagaagsan tabs ee ay version mobile iyadoo marka lagu rakibay kombuyuutar. Waxa intaa dheer in, Chrome u telefoonnada gacanta ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si aad u codsato version desktop ah websites ah, waa in dadka isticmaala dhib helitaanka goobaha 'mobile version leeyihiin.
Kuu ogolaanayaa baaritaan cod ku salaysan-.
In uu dhisay-in Flash Player.
Ma gaarka ah hufan qoreysa heli karo.
Meelaha qaar waxaa laga yaabaa in aynan browser.
• 9. dul istaagin Browser
Browser dul istaagin la 4.1 out of 5 xiddiga rating on Google Play Store waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Android. Browser waxay leedahay muuqaal gaar ah oo ka dhigaya bogga internetka baadhay inay ku shuban ee asalka ah, sidaas oggolaadaan in aad sii waddo hawsha aad hadda. Waxa aad wargelin ku saabsan loading guul bogga internetka ee via Rasuulka madaxa chat si aad u bedelan kartaa bogga iyo bilowdo dhirta.
Browser ayaa sidoo kale taageero multi-window kuu ogolaanaya inaad si ay u isticmaalaysa iyada oo in ka badan hal bog web isku mar, sidaas dedejinta aad waayo-aragnimo dhirta iyo badbaadinta markii qiimaha leh.
Kuu ogolaanayaa bogga soo jeeda loading.
Taageerada fankooda multi-window.
Mana aha siman sida tartanka kale.
A browser dhisay-in qalabka Apple saartaa in ay haystaan ​​wax browser kale web u fankooda Internet ee macruufka telefoonada iyo kiniiniyada. Raaxaysan rating xiddiga of 4 out of 5 by dadka isticmaala ay ka, Safari ka mid ah muuqaalada sida jiilka password, gacanta waalidka, dhirta gaarka ah, iwm
Iyadoo feature auto-haraggiina dhafan ee omnibar magacaabay cinwaanka bar iyo badhamada beryihii hore ee daafaca iyo weerarka bedelay gacanta ku navigation weerar dadban ku-driven, waxa uu noqonayaa mid sahlan si aad u eegto waxa ku jira bogagga internetka si cad iyo isticmaalo goobaha kale ee si sahlan marka loo baahan yahay.
Miyuu ku dhowaad dhammaan qaababka amniga iyo arimaha gaarka ah ee loo baahan yahay.
Kuu ogolaanayaa downloads degdeg ah.
Aan la beddeli karaa.
Takhalusid cookies waa hawl aad u dhib.
Marka laga Kadib mobile kor ku wada hadleen, waxaa jira kuwo kale oo badan. Si kastaba ha ahaatee liiska kor ku xusan waxaa ku jira kuwa sifeeyay in ay qaddarinayaan intooda badan ee isticmaala dunida oo dhan.
> Resource > macruufka > 10 Kadib Fast u Mobile (Android iyo macruufka)